Somali - Other languages - Informasjon - Ålesund VGS - Møre og Romsdal fylkeskommune
Ku soo dhawoow Dugsiga Sare ee Ålesund videregående skole!
Isniin 22-ka Ogost waa bilaabida iskuulka, oo waxannu ardayda cusub iyo kuwii horeba leenahay ku soo dhawoow sannad-dugsiyeed cusub. Dugsiga sare ee Ålesund videregående skole waxa uu ka koobanyahay qiyaastii 820 arday oo u kala qaybsan labo xarumood, oo kala ah Volsdalsberga (Sjømannsveien 27) iyo Latinskolen (Øvregata 13).
Ardayda madooyinka xirfadaha (Warbaahinta iyo isgaadhsiiska, Beeraha iyo xoolaha, Adeega iyo isu-socodka, Farsamada iyo wax-soo-saarka warshadeed) waxa imanayaan Volsdalsberga. Ardayda maadooyinka guud (madooyinka takhasuska, CREO, madooyinka cayaaraha, Diyaargareynta shaahada lagu galo waxbarasho sare) waxa ay imanayaan Latinskolen. Ardayda Volsdalsberga waxa ay ku kulmayaan goobta wadaaga ah ee dabaqa 1-aad. Ardayda Latinskolen waxa ay ku kulmayaan barxadda dugsiga. Wakhtiga imaanshaha waxa aad ka helaysaa HALKAN.
Maalinta iskuulka ee Ålesund videregående waxa ay bilaabmaysaa saacada 8.15 waxaanay dhammaanaysaa 14.50. Ardaydu waxa ay soo qaadanaysaa cunto ama cunto ayey ka iibsataa maqaaxida. Wakhtiga la furayo labada maqaaxi waxa aad ka helaysaa HALKAN.
Ardayda degan meel dugsiga u jirta in ka badan 6 kiilomitir waxa ay xaq u leeyihiin in dugsiga lagu geeyo bilaash. Foomka codsiga oo elektoroonig ah waxa aad ka helaysaa HALKAN. La soo xidhiidh xafiiska dugsiga haddi aad rabtid warbixin dheeraad ah ama in lagaa caawimo codsiga.
Fasal kasta waxa uu leeyahay macalin koowaad, oo ardaydu hoos imanayso. Xogta xidhiidhka ee macalimiinta koowad waxa aad ka helaysaa HALKAN. Qayb kasta waxa ay leedahay maamule qaybeed, oo ka masuul ah dhammaan waxbarashada iyo hawlaha ka socda qaybta. HALKAN ayaad ka helaysaa iyaga.
Dugsigu waxa uu leeyahay saddex la-taliye, labo jooga Volsdalsberga iyo mid jooga Latinskolen. La-taliyeyaashu waxa ay ardayda ka caawin karaan doorashada madooyinka iyo barmaamijka waxbarasho, ama waxa ay talo ka siin karaan waxbarashada iyo shaqooyinka. HALKAN ayaad ka helaysaan la-taliyeyaasha.
Xarun kasta waxa joogta kaalkaaliso caafimaad, oo lagala xidhiidhi karo su’aalo kasta oo ku saabsan caafimaadka jidhka iyo dhimirka. HALKAN ayaad ka helaysaa warbixin ku saabsan adeegyada kaalkaalisada.
Deeqda waxbarasho ee Lånekassen
Dhammaan ardayda leh xaqa dhallinyarnimo ee dugsiga sare waxa ay heli karaan deeqda qalabka, marka laga reebo ardayda ku jirta carbinta ama kuwa la midka ah. Adiga ayaa iskaa u codsanaya deeqda waxbarasho, waxaanad ugu horeyn codsan kartaa marka aad boos ka heshid dugsi. Marka aad codsatid deeq waxbarasho waxa Lånekassen eegi doonaa in aad xaq u leedahay deeqo kale. La-taliyeha ayaad ka codsan kartaa inuu kaa caawiyo codsiga, ama waxad ka ogaan kartaa HALKAN.
Ardayda bilaabaysa Vg1 waxa ay kala dooran karaan labo xal.
1) Amaanaysi/kiraysi kombuutar oo uu keenayo mulkiilaha dugsigu. Waa inaad codsatid ugu dambeyn 30.06. Kombuutarka waxa la bixinayaa bilowga dugsiga. Waa inaad sannad kasta bixisid lacag u dhiganta deeqda qalabka ee laga helo Lånekassen. Warqadda bixinta lacagta waxa la soo dirayaa 15-ka nofembar. Nidaamkan waxa ka mid ah cilaad-tirida, dayactirka iyo caymiska shilka. Kombuutarka adaa haysanaya marka aad bixisid lacagaha dhammaantood.
2) In hal mar lagu siiyo 2500 karoon oo taageero u ah inaad iskaa soo iibsatid kombuutar. Lacagta waxa laguu soo dirayaa nofembar. Waa inaad iskaa isaga bixisid cilaad-tirida, dayactirka iyo caymiska haddii aad rabtid.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka kombuutarada waxa ka helaysaa HALKAN.
Buugaagta iskuulka iyo maktabadda
Ardayda waxa ay amaanaysan kartaa dhammaan buugaagta ay u baahanyihiin. Amaanaysiga waxa loo bixinayaa koox-koox marka dugsigu bilaabmo. Sida kale iskaa ayaad u amaanaysan kartaa buugaagta aad u baahantahay. Maktabadda guud ee dugsigu waxa ay ku taalaa Volsdalsberga, iyadoo laan ku leh Latinskolen. HALKAN ayaad ka helaysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan maktabadda.
Dugsigu waxa uu rabaa inuu wadashaqayn wacan la yeesho waalidka ardayda. Xeerka waxbarashada § 1-1 faqradda koowaad waxa ay waajibinaysaa in dugsiga iyo gurigu yeeshaan wadashaqayn. Qaabab kala duwan ayaanu arrintan u fulinaa. Isla bisha Ogost waxa waalidka ardayda Vg1 lagu casuumayaa kulan warbixinneed oo ku saabsan iskuulka. Waalidku sida kale waxa ay geli karaan Fronter, oo ah nidaamka dijitalka ah maamulka waxbarashada dugsiga. HALKAN ka akhriso warbixin dheeraad ah.
Dugsiga waxa ku waajib ah inuu waxbarasho af-noorweyji oo dheeraad ah siiyo ardayda ku hadasha af-hooyo oo aan ahayn af-noorweyji. Arrintan waxa la qorshaynayaa bilowga sannad-dugsiyeedka. La xidhiidh la-taliyaha haddii aad rabtid warbixin dheeraad ah.